Gobolka Afdheer Iyo Qiimayntii 9ka Bilood - Cakaara News
Gobolka Afdheer Iyo Qiimayntii 9ka Bilood
Hargeele (cakaaranews )Jumce 15ka April 2016, Shirkii Qiimaynta waxqabadka 9ka bilood oo ay kasoo qaybgaleen dhamaan degmooyinka hoos yimaada Gobalka Afdheer islamarkaana lagu qiimaynayay qorshayaashii qorshaysnaa in la qabto, sida ay u qabsoomeen iyo kuwa aan qabsoomin sababta aysan u qabsoomin ayaa si hab samileh uga bilaabatay Xarunta Gobolka ee Magaalada Hargeele.
Shirkan qiimaynta ah oo diirada lagu saarayay waxqabadkii dhinacyada horumarka, Nabadgalyada iyo maamulka suuban kaasoo degmo kasta ay soo jeedinaysay hirgalinta qorshihii 9ka bilood ee u yiilay sida uu ufulay iyo waliba qorshaha aan fulin iyo sababta uusan u fulin.
Hadaba Gudoomiyaha Gobalka mudane Maxamed Axmed Badhcun oo u waramay shabakada wararka ee cakaaranews ayaa sheegay in qiimayntani ay ahayd mid la isu qiimaynayay si cadcadaan iyo isla xisaabtan leh islamarkaana degmo kasta ay kusoo bandhigaysay waxqabadkeedii. Wuxuuna intaa kudaray masuulku in degmooyinku mid ba mida kale ay khibrad ka qaadanayso islamarkaana lagu saxayo galdalooladii degmooyinka.
Gudoomiyaha ayaa hadalkiisii kusoo gabagabeeyay in qiimayntu ay si wanaagsan u socoto islamarkaana ay rajaynayaan in jawi wanaagsan ku soo gabagabawdo.